Nhọrọ a nke athlọ ịsa ahụ, akwala ụta maka ịzụta ya!
Home / blog / Nhọrọ a nke athlọ ịsa ahụ, akwala ụta maka ịzụta ya!
2020 / 10 / 14 nhazi ọkwablog 789 0
N'ihe banyere ụlọ ịsa ahụ, anyị niile maara ya dị ka ụlọ ịsa ahụ a na-ahụ anya, na-ebu nnukwu ibu nke nchekwa ụlọ ịsa ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị họrọ okwu dị mma, uru nke ụlọ ịsa ahụ nwekwara ike ịdabere na ya iji bulie aka.
Yabụ nhọrọ nke ụlọ ịsa ahụ na-enweghị ike ịdị nkịrịka, nke mbụ, gaa na ikike, sochiri ya dabara ụdị mma ụlọ ịsa ahụ niile, wdg, họrọ ihe nrụtụ aka, ọ dị mfe ịgbagha ndị mmadụ.
Olee otú ịhọrọ a ụlọ ịwụ Cabinet?
1.Họrọ Dị ka Blọ Bathroom
Lọ ịsa ahụ ụlọ bụ ebe kachasị mma n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, enwere ike ịsị na ọ bụ ngwaahịa dị mkpa iji gosipụta mma na ụtọ nke onye nwe ya. Ya mere, ihe mbụ ị ga-atụle mgbe ịzụrụ ụlọ ịsa ahụ bụ ụdị nke ụlọ ịsa ahụ, ọ ga-adabakwa n'ụdị ihe ịchọ mma ụlọ ha.
Chinesedị Ọhụrụ China
Uzo ohuru nke China abughi ihe di mfe nke uzo ndi China, kama ihe ndi ozo nke eweputara site na ihe ndi China na ihe nke oge a.
Styledị nke ụlọ ịsa ahụ a na-ejikarị osisi siri ike dị ka isi ihe, na imewe agaghị eji usoro dị mgbagwoju anya na nke dị mgbagwoju anya, mana ịhọrọ ahịrị geometric dị mfe karị. General-eji nke a ịke nke ime ụlọ ịwụ kabinet ga-apụta ihe mara mma nna ya ukwu.
Mindị Minimalist nke Oge A
Minimallọ nke ụlọ ịsa ahụ nke oge a dị obere nke oge a na-elezikwu anya na ịdị mma na nke ịchọ mma. Ya mere, ụdị a nke ime ụlọ ịsa ahụ ga-ejikarị agba ọkụ maka ọdịdị nke agba, ebe ọrụ nchekwa ya dị ike, enwere ike ịsị na ọ bụ nhọrọ mbụ maka obere ezinụlọ.
Styledị ụlọ ịsa ahụ a na-ewu ewu ugbu a n'etiti ọkacha mmasị nke ndị na-eto eto, n'ihi ịdị mfe na mmesapụ aka ya mana anaghị efunahụ echiche nke imewe, kamakwa ọtụtụ ụdị ụlọ ụlọ dabara adaba.
O doro anya na ụdị Mediterenian bụ ụdị pụrụ iche nke ụdị ịchọ mma niile. Ebe ọ bụ na ụdị Mediterenian sitere n'ụsọ osimiri azure nke Spain yana aja aja aja aja, ọcha na acha anụnụ anụnụ bụ agba ya. Colorsdị agba abụọ a nwere ike ịmepụta mmetụta na-atọ ụtọ, n'efu.
2.Họrọ dika usoro nhazi ahụ siri dị
Gba mmiri na-adịghị ọcha
Akwụsịtụrụ oche ndị dị na ụlọ ịsa ahụ bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ụlọ. Ruru ya overhanging imewe na ala, nke na-ekewa ndị kabinet si n'ala, ọ n'ụzọ dị irè na-agbasa mmiri na iru mmiri, na-egbochi ohere nke mmiri na-awakpo kabinet.
Na mgbakwunye, o nwekwara uru nke ịbawanye echiche nke ohere. Yabụ ọbụlagodi na ọ bụ obere ụlọ, awụnyere na ime ụlọ ịwụ a kabinet na otu usoro nke mirror kabinet, agaghị na-eche mmadụ jupụtara.
Standlọ Na-asa Ime athlọ Ime .lọ
E jiri ya tụnyere ụlọ ịsa ahụ na-akwụ ọtọ, ụdị ụlọ a na-asa ahụ adịghị mkpa maka mgbidi mgbe etinyere ya.
Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ime ụlọ ịwụ ahụ mmiri bụ mmiri mmiri ogologo oge. Karịsịa ma ọ bụrụ na ụlọ anaghị akpọ nkụ ma mmiri dị iche, ụlọ ịsa ahụ ime ụlọ na-adịkarị na mmiri ga-abanye na mmiri, si otú a na-emebi ụlọ ọrụ, na-emetụta ndụ ọrụ.
Ya mere, mgbe ị na-azụ ihe eji eme ụlọ ịsa ahụ, jide n'aka na ịhọrọ akwa mmiri na-enweghị mmiri nke ime ụlọ ịsa ahụ, naanị otu ụzọ iji hụ na ụlọ dị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ adịghị arụ ọrụ, iji gbatịkwuo ọrụ ahụ.
3.According Iji Nhọrọ Nhọrọ Ndị Isi
E jiri ya tụnyere ndị ọzọ na ime ụlọ ịwụ kabinet ihe, osisi siri ike ụlọ ịwụ kabinet bụ maa ndị kasị environmentally friendly na mma, dị ka osisi ngwá ụlọ na-emekarị mere kpọmkwem site a dịgasị iche iche nke osisi dị ka ngwaọrụ.
Agbanyeghị, n'ihi nkọwa nke gburugburu ụlọ ịsa ahụ, a na-ejikarị osisi roba eme ka ụlọ mposi. Nke a na osisi distilled na dehydrated, nakwa dị ka ụfọdụ ndị ọzọ na waterproofing usoro ihe n'ụzọ dị irè waterproof na mmiri na-àmà.
Lọ ịsa ahụ nke ụlọ a ji ihe a mee nwere ike ịmepụta oghere ime ụlọ ịwụ na mmetụta nke oge a ma dị mfe ihicha. Agbanyeghị, ị ga-akpachara anya na ihe dị nkọ iji zere mmebi site na ịkụ aka n'oge ojiji kwa ụbọchị.
Ihe a dị ezigbo mma mgbochi amị amị ọkọ-ọkọ, nwere ike kwuru na-abụ ihe kasị mma mmezi nke ụlọ ịwụ kabinet ihe.
Agbanyeghị, ngwongwo PVC nwekwara ọghọm: ọ bụrụ na itinye ihe ndị dị arọ na ya ogologo oge dị mfe nrụrụ, yabụ oke nke kabinet ụlọ a ga-adị obere ntakịrị, dabara adaba maka ezinụlọ atọ iji mee ihe.
Etu esi edobe ulo ịsa ahụ?
1.Bathroom Cabinet nhicha
1, ime ụlọ ịwụ kabinet contra mmiri, na-na-na ubé keguru mmiri ákwà nwere ike jiri nwayọọ hichapụ zere corrosion kpatara mmiri.
2, ihe nchacha mma iji eji ezé na-enweghị ntụpọ, ihe eji eme ihe ezé n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ bụkwa ngwaahịa imetọ ihe dị mma.
3, a ga-etinye ụlọ ịsa ahụ na ụfọdụ ncha, ndị na-ehicha ihe na ngwaahịa ndị ọzọ na-ehicha, akpachapụghị anya na-ehichapụ ihe nhicha kachasị mma iji kpochapụ ozugbo (ma ọ bụ na ngwaahịa nhicha dị n'okpuru akwa akwa).
2 Ime ụlọ kabinet Mmezi
Lacquer scuffs, na-adịghị emetụ agba n'okpuru osisi, dị na kabinet agba otu crayon ma ọ bụ ink, na kabinet nke trauma iteto ekpuchi ekpuchi gụrụ isi agba, na mgbe ahụ uzo ntu Polish thinly ntekwasa oyi akwa nwere ike ịbụ.
3 Blọ ịsa ahụ Cabinet Daily Iji Atụmatụ
1, ime ụlọ ịwụ ahụ na njikwa, kwesịrị ibuli ma tinye ya, etinyela aka siri ike; dị ka enyo enyo na kọntaktị ala, kwesịrị iji ihe dị nro kpuchie ya, ka ọ ghara ichi ọnya; ala adịghị ewepụghị, kwesịrị ịbụ mpe mpe akwa ụkwụ.
2, ntinye nke mmiri n'ime ọkpọkọ ma gaa na mmiri mmiri iji jikọọ okirikiri, ma chọọ ka ịlele oge niile iji zere ụcha mmiri na-emetụta ụlọ ọrụ.
3, agaghi eji ihe di ike mee ka ocha elu nke kabinet, ka o ghara ime ka mmebi elu nke mmiri na-ebute.
4, iji gbochie ìhè ọkụ, iji gbochie kabinet ahụ imebi emebi. Mee ka ụlọ ahụ nwee ikuku.
Stylesdị dị iche iche, ụdị dị iche iche nke ụlọ ịsa ahụ nwere ike iwetara gị ahụmịhe dị iche. Ihe dị n’elu bụ maka nhọpụta na ndozi nke ime ụlọ ịsa ahụ, enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.
Nke gara aga :: Nhọrọ a nke athlọ ịsa ahụ, akwala ụta maka ịzụta ya! Osote: Kohler were ụlọ ọrụ Smart Bathroom maara nke ọma n'ụlọ ikpe maka ihe karịrị nde $ 1.4 na Mmebi